OST ukuze PST Converter. Guqula OST kuya ku-PST.
Kungani DataNumen Exchange Recovery?
Izinga lokutakula yi-most umbandela obalulekile we OST ukululama kanye OST kumkhiqizo wokuguqulwa kwe-PST. Ngokususelwa ekuhlolweni kwethu okuphelele, DataNumen Exchange Recovery inezinga lokululama elihle kakhulu, ingcono kakhulu kunanoma iyiphi enye imbangi emakethe!
Funda kabanzi mayelana nokuthi kanjani DataNumen Exchange Recovery kubhema umncintiswano
Ngithanda ukukubonga kakhulu ngokwenza kube lula ukuthola ibhokisi le-imeyili oselilibheka njengelost, ne-DataNume Exchange Recovery
Bengifuna ukusho nje ukuthi ngiyabonga ngokunikeza lolu hlelo. Ngisanda kuyisebenzisa ukuguqula ngempumelelo enkulu OST file engivumela ukuthi ngilulame
Ngendlela, silwazisa kakhulu usizo lwakho. Senze isinqumo sokuthenga Datanumen Exchange Recovery ithuluzi izolo, nenye yezinto ebesizisekela
Uyaziswa kakhulu! Manje sengingathola imininingwane yami yekhalenda ekusethweni okungalungile OST (kufanele ube
Lesi isiqeshana esikhulu sesoftware. Ithole ukuthi iphukile OST file okokuqala bese livulwa okokuqala ku-Outlook 2019. Ngangizame enye engu-3
ex CIO, manje usuthathe umhlalaphansi
Ngizobe ngincoma umkhiqizo wakho kunoma ngubani odinga
Ngemuva kokushintshwa kwe-PC yami, bengidinga ukululama ukuze ngizisebenzisele ifayili elidala le-UST ngiliguqulela ku-PST. Phakathi kwezinto eziningi ezithambile, enginazo
Mashi 7, 2020
Ngemuva kokuchitha isikhathi esingaphezu kwamahora ayi-10 kufundiswa i-MS ukuthi iyini inkinga ngenkathi ngithuthukisa i-Outlook 2010 yami eya ku-2013 nokuzenzakalelayo kwe
ISan Diego, CA, e-USA
Kwangathi i-15th, i-2015
Isixazululo Sokulandela Amaphutha Ejwayelekile Nezinkinga Ekushintshaneni OST Ifayela
Ukushintshaniswa kumanje kumodi yokutakula
Amaphutha kungenzeka ukuthi abonwe kufayela
Ifayela Alilona Ifolda Ye-Offline File
I-Oversized OST Inkinga Yefayela
Susa Izinto Zokushintshana ngephutha
Izici eziyinhloko ku DataNumen Exchange Recovery v8.5
I-Support Exchange 5.0 kuya ku-2019.
Sekela i-Outlook 97 kuya ku-2019 ne-Outlook yeHhovisi 365.
Amaprosesa asekelwe OST amafayela enziwe yi-Exchange ActiveSync.
Ukusekela ukuthola imilayezo yemeyili, amafolda, kosts, amakhalenda, ama-aphoyintimenti, izicelo zomhlangano, oxhumana nabo, uhlu lokusabalalisa, imisebenzi, izicelo zomsebenzi, amajenali namanothi ku- OST amafayela. Zonke izakhiwo, njengesihloko, kuye, kusuka ku-cc, bcc, usuku, njll. Ziyatholakala.
Ukusekela ukuthola izinto ezishumekiwe, njengomunye umyalezo, ama-Excel Worksheets, amadokhumenti e-Word, njll.
Izinto ezibuyisiwe ziyagcinwa futhi ziguqulwe zibe ngamafolda womuntu siqu (PST) amafayela atholakala kalula yi-Microsoft Outlook namanye amaklayenti ahambisanayo eposi.
Ukusekela ukuthola izinto ezisusiwe ebhokisini leposi le-Exchange, kufaka phakathi imilayezo yeposi, amafolda, kosts, amakhalenda, ama-aphoyintimenti, izicelo zomhlangano, oxhumana nabo, uhlu lokusabalalisa, imisebenzi, izicelo zomsebenzi, amajenali namanothi.
Ukusekela ukuguqula OST kumafayili we-PST ngokushesha nangendlela efanele.
Ukusekela ukuthola i-2GB enkulu OST amafayela.
Ukusekelwa ukuze uthole kabusha OST amafayela amakhulu njengo-16777216 TB (ie 17179869184 GB).
Ukusekela ukuthola kabusha iphasiwedi kuvikelwe OST amafayela, ukubethela okucindezelayo nokubethela okuphezulu (noma ukubethela okuhle) kuyasekelwa. I- OST ifayela lingatholwa noma ungenayo iphasiwedi.
Ukusekela ukukhiqiza ifayela le-PST elingaguquguquki ngefomethi ye-Outlook 97-2002, ifomethi ye-Outlook 2003-2019, ne-Outlook yefomethi ye-Office 365.
Ukusekelwa ukuze uthole kabusha OST idatha yefayela kusuka kumafayela we-VMWare VMDK (i-Virtual Machine Disk) angalimele noma awonakele (*. vmdk), amafayela e-Virtual PC VHD (Virtual Hard Disk) (*. vhd), Amafayela we-Acronis True Image (*. tib), Norton Ghost amafayela (*. gho, * .v2i), amafayela weWindows NTBackup (*.bkf), Amafayela wesithombe se-ISO (*. Iso), amafayela wesithombe seDiski (*. Img), amafayela wesithombe se-CD / DVD (*. Bin), Amafayela we-Alcohol 120% Mirror Disk File (MDF) (*. Mdf) namafayela wesithombe seNero (* .nrg).
Ukusekela ukulungisa nokuguqula OST amafayela kwimidiya eyonakele, njengamadiski e-floppy, Zip amadiski, ama-CDROM, njll.
Ukusekela ukulungisa nokuguqula iqoqo le- OST amafayela.
Ukusekela ukuthola nokukhetha ifayela le- OST amafayela azolungiswa kukhompyutha yekhasimende.
Sekela ukuhlanganiswa neWindows Explorer, ukuze ukwazi ukulungisa i- OST ifayela elinemenyu yokuqukethwe ye-Windows Explorer kalula.
Ukusebenzisa DataNumen Exchange Recovery ukuguqula OST kuya PST Amafayela
Lapho kwenzeka inhlekelele kuseva ye-Microsoft Exchange, njengokuphahlazeka kweseva, inkohlakalo egciniwe yedatha, njll., Ifolda ye-Exchange offline (.ost) Amafayela kukhompyutha yeklayenti aqukethe imilayezo yeposi nazo zonke ezinye izinto ze-akhawunti yakho ye-imeyili ye-Exchange. Ungasebenzisa DataNumen Exchange Recovery ukuguqula OST amafayela kumafayela we-PST ukuze idatha engaphakathi kwamafayela itholakale ku-Microsoft Outlook.
Ngaphezu kwalokho, lapho uhlangabezana namaphutha nezinkinga ezahlukahlukene nge OST amafayela, njengenkohliso yedatha, amaphutha wokuvumelanisa, ukususa ama-imeyili ngephutha, i-2GB enkulu OST inkinga yefayela, njll., ungahlala usebenzisa DataNumen Exchange Recovery ukuthola kabusha idatha kusuka kufayela le- OST amafayela bese uwaguqula abe yifomethi ye-PST.
Qaphela: Ngaphambi kokuguqula OST ifayela nge DataNumen Exchange Recovery, sicela uvale noma yiziphi ezinye izinhlelo zokusebenza ezingafinyelela noma ziguqule ifayela le- OST ifayela. Futhi sicela uvale iMicrosoft Outlook.
Uma uyazi inguqulo ye-Outlook yomthombo OST ifayela elizolungiswa, lapho-ke ungalichaza ebhokisini le-combo eceleni kwebhokisi lokuhlela ifayela eliwumthombo, amafomethi akhona yi-Outlook 97-2002, i-Outlook 2003-2010, ne-Outlook 2013-2019 / Office 365. Uma ushiya ifomethi njenge- "Auto Determined", khona-ke DataNumen Exchange Recovery izoskena umthombo OST ifayela ukunquma ifomethi yalo ngokuzenzakalela. Noma kunjalo, lokhu kuzothatha isikhathi esingeziwe.
DataNumen Exchange Recovery izogcina idatha eguquliwe njengefayela elisha ngefomethi ye-Outlook PST ukuze ukwazi ukusebenzisa iMicrosoft Outlook ukuvula futhi ubone izinto eziguquliwe. Futhi ngokuzenzakalela, igama lefayela elisha lithi xxxx_recovered.pst, lapho i-xxxx igama lomthombo OST ifayela. Isibonelo, komthombo OST Umthombo wefayela.ost, ifayela eliguqulwe ngokuzenzakalela lizoba yiSource_recovered.pst. Uma ufuna ukusebenzisa elinye igama, sicela ukhethe noma usethe ngokufanele:
Ungafaka igama lefayela eliguquliwe ngqo noma uchofoze ifayela le- ukuphequlula bese ukhetha ifayela eliguquliwe.
Ungakhetha ifomethi yefayela le-PST eliguquliwe ebhokisini le-combo eceleni kwebhokisi lokuhlelwa kwefayela eliguquliwe, amafomethi akhona yi-Outlook 97-2002 ne-Outlook 2003-2019 / Office 365. Uma ushiya ifomethi njenge- "Auto Determined", lapho-ke DataNumen Exchange Recovery izokhiqiza ifayela eliguquliwe le-PST elihambisana ne-Outlook efakwe kukhompyutha yendawo.
Chofoza inkinobho, futhi DataNumen Exchange Recovery intando start ukuguqula kusuka kumthombo OST ifayela kufayela le-PST. Ibha yenqubekela phambili
Manje usungavula ifayela eliguquliwe le-PST nge-Microsoft Outlook bese ubona izinto eziguquliwe. Ngicela uqaphele DataNumen Exchange Recovery bazozama ukufaka izinto eziguquliwe kumafolda abo woqobo. Kodwa-ke, nge-lost & Izinto ezitholakele, zizotholwa bese zifakwa kumafolda akhethekile afana neRecovered_Group1, Recovered_Group2, njll
DataNumen Exchange Recovery 7.8 ikhishwa ngoDisemba 10, 2020
DataNumen Exchange Recovery 7.6 ikhishwe ngo-Okthoba 31, 2020
DataNumen Exchange Recovery 7.5 ikhishwa ngo-Agasti 19th, 2020
DataNumen Exchange Recovery 7.2 ikhishwa ngoJuni 21, 2020
DataNumen Exchange Recovery 7.1 ikhishwe ngoFebhuwari 8, 2020
DataNumen Exchange Recovery 6.9 ikhishwe ngo-Okthoba 3, 2019
DataNumen Exchange Recovery 6.8 ikhishwa ngoJulayi 8, 2019
DataNumen Exchange Recovery 6.5 ikhishwa ngoJanuwari 24, 2019
I-Support Exchange Server 2019 ne-Outlook 2019.
DataNumen Exchange Recovery 6.0 ikhishwa ngoNovemba 12, 2018
Nikeza izilawuli eziningi ku-log yokutakula.
DataNumen Exchange Recovery 5.6 ikhishwa ngoSepthemba 21, 2018
DataNumen Exchange Recovery 5.5 ikhishwe ngo-Ephreli 28, 2018
I-Support Exchange Server 2016, i-Outlook 2016 ne-Office 365.
DataNumen Exchange Recovery 5.0 ikhishwa ngoJulayi 29, 2015
Ukusekela ukulungisa iphutha elithi “Ayikwazi ukuhambisa izinto” OST amafayela.
DataNumen Exchange Recovery 4.5 ikhishwa ngoJuni 12, 2014
Ukusekela ukuthola i-Outlook 2013 OST amafayela.
DataNumen Exchange Recovery 4.0 ikhishwa ngo-Ephreli 29, 2014
Ukusekelwa ukuze uthole kabusha OST idatha yefayela kusuka kumafayela we-VMWare VMDK (i-Virtual Machine Disk) angalimele noma awonakele (* .vmdk), amafayela e-Virtual PC VHD (Virtual Hard Disk) (* .vhd), Amafayela we-Acronis True Image (* .tib), Norton Ghost amafayela (* .gho, * .v2i), amafayela we-Windows NTBackup (*.bkf), Amafayela wesithombe se-ISO (* .iso), amafayela wesithombe seDiski (* .img), amafayela wesithombe se-CD / DVD (* .bin), amafayela we-Alcohol 120% Mirror Disk File (MDF) (* .mdf) namafayela wesithombe seNero (* .nrg).
DataNumen Exchange Recovery 3.5 ikhishwe ngoJanuwari 20, 2014
DataNumen Exchange Recovery 2.0 ikhishwa ngoDisemba 29, 2008
Sekela iMicrosoft Outlook 2007 ne-Exchange 2007.
DataNumen Exchange Recovery 1.1 ikhishwe ngoNovemba 10, 2006
Sekela izindlela eziningana zokululama ezithuthukisiwe.
DataNumen Exchange Recovery 1.0 ikhishwa ngoJanuwari 1, 2006
Ithuluzi elinamandla lokuphindisela isitoreji esingaxhunyiwe ku-inthanethi esiyizintandane noma esonakele (.ost) amafayela